LOKA INDIANOCEANIE :: Norombahin'i Jean Pierre Haga, mpanoratra malagasy, ny fandresana • AoRaha
LOKA INDIANOCEANIE Norombahin’i Jean Pierre Haga, mpanoratra malagasy, ny fandresana
Tontosa tany Maorisy, ny alakamisy 29 novambra lasa teo ny lanonana fanomezam-boninahitra ny « Loka Indiano­céanie » avy tamin’ny fifaninanana manoratra tononkalo, tantara, sombin-tantara, tantara tsangana, tantara foronina, fanadihadiana, angano… eo anivon’ireo nosin’ny Ranomasimbe Indianina.
I Jean Pierre Haga Andriamampandry, poeta sady mpanoratra malagasy, fantatra amin’ny hoe Jean Pierre Haga eo amin’nypenina no nibata ny fandre­sena tamin’ny fifaninanana, tamin’ny alalan’ilay tantara hoe : « Le Jumeau ». Tsiahivina fa efa nodimandry tamin’ny 24 septambra lasa teo ity mpanoratra andrarezina ity, fotoana fohy taorian’ny andro niantefan’ny safidin’ ireo mpitsara tany aminy.
Natolotra an’i Vonifanja Andriamampandry Ramparany, vady navelan’i Jean-Pierre Haga araka izany ny loka. Mitentina 4 000 000 Ariary miaraka amin’ny fanontana ho telonjato isa ilay sanga­nasany no loka nomena azy.
« Tantarao an-takila maro » no lohahevitra novoizina nandritra ny fifaninanana. Anisan’ ny mason-tsivana nitsarana ireo asa soratra ireo ny haifa­noratra sy ny fahavaon’ny soratra (originalité) ary ny fifandraisany amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina. Asa soratra enina amby dimam­polo, an’ireo poeta sy mpanoratra, no nandalo teo ambany mason’ireo vondron’ ny mpitsara dimy voafantina nahitana ny solontenan’ny nosy Kaomôro, Maorisy, La Réunion, Seisela ary i Tsiky Rakotomavo, ho an’
i Madagasikara. Nisedra dingana telo mazava tsara ny fitsarana izany, ka ny andiany voalohany no nama­ritan’ireo mpitsara ny fomba fiasa nitondrana ny fitsarana. Ny andiany faharoa no nifantenana ireo asa soratra valo mandresy lahatra ny mpitsara tsirairay. Ny andiany fahatelo no namelabelaran’ny mpitsara tsirairay ireo telo heverina fa mendrika. Taorian’izay no nahafan-­tarana izay tena mendrika, ka i Jean Pierre Haga Andriamampandry no nahazo ny isa be indrindra.
Tononkalo arahina mozika Hanolotra ny « Msafara » i DaGenius
MISS MADAGASCAR 2019 :: Voahosotra ho tovovavy mendrika i Binguira Valerie avy any Analanjirofo
FIATREHANA NY KRISMASY :: Hanolotra fanomezana ny zaza sahirana ny IKM